अहिले सम्मकै लाईभ उत्तेजक दोहोरी । किन गाउछन् कलाकार यस्तो ? - Enepalese.com
अहिले सम्मकै लाईभ उत्तेजक दोहोरी । किन गाउछन् कलाकार यस्तो ?
इनेप्लिज २०७४ असार २४ गते ११:२० मा प्रकाशित
पहिलेका माया प्रेमका गीतहरु अहिले सेक्ससंग जोडिन थालेका छन् । बिषेशत नेपाली मौलिक पहिचान बोकेको भनिएको लोक तथा दोहोरी गीतहरुमा यस्तो बिक्रीता आएको हो । कलाकारले माया प्रेमबाट दोहोरी गीता सुरु गर्छ र त्यहा रात बिताउने सेक्स गर्ने खाल्का शब्द ल्याउछ त्यसले सुन्ने र हेर्ने दर्शकलाई लजास्पद बनाउछ । यस्तै एउटा दोहोरी छ हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस् जसले तपाईलाई पनि उत्तेजित बनाउन सक्नेछ ।